Ahoana ny fomba hahazoana antoka fa vakian'ny olombelona ny famoahana gazety anao fa tsy robot?
Home » Lahatsoratra farany farany » Aviation » Ahoana ny fomba hahazoana antoka fa vakian'ny olombelona ny famoahana gazety anao fa tsy robot?
Aviation • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Fandefasana gazety • teknolojia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mifandray ve ianao rehefa mamoaka fanambarana an-gazety? Raha nanoratra famoahana media nahafinaritra ny masoivohon'ny PR, ny ankamaroan'ny masoivoho dia namoaka fotsiny ny famoahana ny lisitry ny tahiry media, manantena famoahana freebie. Io ilay antsoin'ny indostria hoe "Earned Media." Etsy ankilany, ny "Paid Media" dia manome ireo izay mivezivezy ny famoahana azy ireo amin'ny fibaikoana tanteraka ny marika sy ny hafatrao. eTurboNews nanisy ambaratonga roa hafa ho azy, ary midika hoe mandray karama fotsiny raha ny fahombiazana.
Orinasa lehibe ny fanaparitahana gazety an-gazety, fa ny famoahana toa eTurboNews Matetika dia tsy eo amin'ny lafiny ahazoana an'ity orinasa mitady vola ity,
Ny serivisy fanodinana tariby lehibe toy ny PR Newswire dia voaloa mba hampielezana ny famoahana azy ho amin'ny pulika, ary miaraka amin'izay koa ny fiampangana ny saran'ny fahazoan-dàlana amin'ireo publication lehibe.
Imbetsaka ny famoahana gazety no niafara tamin'ny pejy miafina miafina amin'ny vavahady toa ny Yahoo Finance, Business Journal, ary miteraka tatitra mahavariana amin'ny fanombanana ny isan'ny mety ho mpamaky.
eTurboNews dia manome antoka izao fa ny mpamaky fampahalalam-baovao an-gazety navoaka tao amin'ny vavahady eTN dia olombelona tokoa fa tsy robot.
Rehefa manadihady ny tatitra fizarana ho an'ny famoahana gazety avoakan'ny serivisy tariby sasany, dia afaka mahita solosaina mifampiresaka izy ireo. Ilay orinasa namoaka ny famoahana dia matetika no mahazo tatitra miaraka amin'ny isa an-tapitrisany izay raha ny marina dia zato monja no nahita ilay tantara navoaka tamina famoahana ara-dalàna. Tsy latsaky ny olona vitsivitsy no nanokatra sy namaky ny famoahana, ka nahatonga ny tsindry vitsivitsy monja tamin'ireo rohy tafiditra ao anatin'ny atin'ny famoahana.
Ny vidin'ny famotsorana iray dia afaka mandeha an'arivony maro miaraka amin'ny vokatra kely dia kely.
Ny haino aman-jery mahazo vola dia midika fa ny famoahana izay manana ny mpihaino tadiavina dia saika eo amin'ny lafiny tsy karama amin'ity rojo ity. Kely dia kely ny fandrisihana hamoaka fanambarana an-gazety izay misy ny atiny advertorial.
eTurboNews mahatratra mihoatra ny Mpamaky olona 2 tapitrisa isam-bolana ary nahita vahaolana mandresy / mandresy: Mpamaky olombelona!
eTurboNews vaovao Drafitra fandefasana famoahana tsy voafetra manome toky fa tsy voasazy fotsiny ny mpanjifa raha ny mpamaky iray no tena voatosika hanokatra ny fanambarana an-gazety, mamaky azy ary manindry ny rohy iray izay mahaliana azy. Ny ankamaroan'ny rohy dia mankany amin'ny tranokalan'ny orinasa mandefa.
Raha vantany vao tsindry ny mpamaky amin'ny rohy toy izany dia hisy fiampangana eo anelanelan'ny 15 cents ka hatramin'ny $ 1.50 isaky ny kitiho, arakaraka ny drafitra. Ny sarany farany ambony dia tsy hihoatra ny 1000 tsindry isaky ny famotsorana.
Tombontsoa ho an'ny eTurboNews hametraka tsara ny famoahana ara-barotra, hamakafaka azy ho an'ny teny lakile sy ny lohateny manitra, ary apetrakao ho an'ny motera fikarohana, APPS vaovao, ary serivisy fampitana vaovao, toy ny Google News.
Ny fanambarana an-gazety rehetra dia hampidirina ao amin'ny gazety e-mail eraky ny eTN nahazo loka. Maherin'ny 1/2 tapitrisa ny mpamaky no hahazo fampandrenesana fanosehana ao amin'ny tobin'ny solosain'izy ireo mampiseho ny lohateny famoahana misy rohy mankany amin'ilay tantara.
Famoahana gazety navoaka tamin'ny eTurboNews novaina ho rakitra audio ary apetraka amin'ny eTurboNews. Hovaina koa izy io podcast.
Ny Podcast dia navadika ho a Horonantsary mivantana ary navoaka tamin'ny sehatra 16 mahery, ao anatin'izany ny YOUTUBE, APPLE, Soundcloud, Anchor, Google, sns.
Ny famotsorana dia hadika amin'ny fiteny maherin'ny 50 ary ampidirina ao amin'ny vavahady vaovao amin'ny fiteny vahiny vaovao, mahaleo tena ary natokana ho an'ny eTN.
Izany rehetra izany dia ataon'ny olona izay miahy fa ny mpiara-belona maro eto amin'izao tontolo izao dia hamporisihina hamaky sy hifandray amin'ny votoatin'ny fanambarana an-gazety.
Ireo mpikambana nisoratra anarana tamin'ny drafitra famandrihana tsy manam-petra dia tokony hodinihina ao anatin'ny tantara etitorialy ho avy. Ny mpikambana toy izany dia asaina ihany koa amin'ny dinidinika amin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao eTV isan'andro, na amin'ny maha mpandray anjara na vahininy ireo adihevitra momba ny Livestream tontonana.
Ireo mpikambana ao amin'ny drafitra Subscripiton momba ny famoahana votoaty tsy voafetra dia mahazo mpikambana fiderana ao amin'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany (WTN).
Fanazavana fanampiny: www.travelnewsgroup.com/un Unlimited
Fampahalalana misimisy momba ny famoahana gazety nataon'ny olombelona